Shir aan caadi ahayn uu maanta XDS uga furmey maanta Jig jiga. - Hargeele - Wararka Somali State
November 30, 2019 170
Shir-weynihii 1aad ee aan caadiga ahayn, ee Xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida, XDS, ayaa si rasmi ah uga furmay madasha shirarka, ee Kaali 1 ee madaxtooyada Deegaanka Soomaalida.
Shir-weynahan oo uu furay gudoomiyaha XDS, Axmada Shide Maxamad, ayaa laga doodidoona go’amadii ay Golayaasha,(Gudiga fulinta iyo Golaha-dhexe) ee XDS, ku go’amiyeen in lagu biiro Xisbiga Barwaaqo, ee dhawaan la filayo in dhidibada loo taago.
Laamaha amniga oo ka hadley mudaharaadkii saakaa ka dhacey Jig jiga.
Shirkii gudiga fulinta ee XDS oo furmay.